Waddada 7 - Transportation | seattle.gov
La cusbooneysiiyay: Maarso 11, 2022
Ilaalinta basaska dhaqaaqooda iyo hagaajinta heelitaanka gaadiidka ee wadaada Rainier Ave S
Cusboonaysiinta shaqo joojinta shamiita ah
Waxa jira shaqo joojin guud oo shamiito ah oo ka socda agagaarka Seattle kaas oo ay ku lug leeyihiin shirkado na siiya shubka mashaariicdayada badan ee dhismaha ee firfircoon. Mashruucan iyo kuwa kale oo badan, waxay ku qasbanaadeen inay hakiyaan shaqada laamida ah ilaa inta laga xalinayo shaqo joojinta.
Tani waa caqabad, SDOT-na waxa ay taageertaa xallinta caddaaladda ee kuwa u dhaxayso. Waqtiga dhow, waxaan sii wadeynaa shaqada kale ee mashruuca ee goobta iyo daaha gadaashiisa waxaanan hubin doonaa inaan wax badan ka wadaagno natiijada shaqo joojinta iyo wixii saameyn ah ee mashruucan marka macluumaadka la helo. SDOT waxa ay weli rajo ka qabtaa in arrintan la xalin doono dhawaan.
Cusboonaysiinta ku saabsan Dhismaha
Dhismuhu waxa la filayaa in uu bilowdo sida ugu dhakhsaha badan April 2022 waxana loo qorsheeyay in uu socdo afar ilaa shan bilood. Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga inta aan isu diyaarinayno samaynta marinka baska ee Route 7 iyo hagaajinta kalsoonida ee Rainier Ave S.
Su'aalo ku saabsan mashruuca?
Noogu soo dir emailka 7TransitPlus@seattle.gov ama noogu dhaaf fariin cod ah (206) 771-0481.
Waddada 7, waa mid ka mid ah dariiqyada fuulista ugu sarreeya ee Seattle; oo u adeegaya in ka badan 11,000 oo rakaab maalinle ah oo taga meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin dugsiyada, xarumaha beesha, dukaamada raashinka, guryaha, iyo jardiinooyinka. Iyo inta Marinka 7 baska loo qorsheeyay inay yimaadaan 10kii daqiiqaba ama ka wanaagsan inta badan maalinta, xaaladaha dariiqyadu waxay sababi karaan dib u dhac.
Waxaan rabnaa inaan ilaalino waxay dadku horey u jeclaayeen baska 7 da oo aan u fududeyno inaan ku xirno Link tareenka fudud, Xarunta Transit Metro, iyo wixii ka dambeeya. Si tan loo sameeyo, waxaanu horumarin ku samaynaynaa wadooyinka dhinaceeda, isgoysyada, calaamadaha, iyo rakibida dariiqyada u hogaansan ADA.
Dhisidda talooyinka aan ka helnay bulshada 2018 iyo 2019, naqshadihii ugu dambeeyay ayaa la dhameeyay 2021 iyo hagaajinta la sameeyay iyada oo qayb ka ah mashruucan Wadada Transit-Plus Multimodal Corridor waxaa ka mid ah hagaajinta dadka lugeynaya, baaskiilka, iyo rogrogmada Rainier Ave S. Si aad u hesho tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan horumarka ku imanaya aaggaaga, eeg maabka iyo qeexitaannada hoose.
Waddada Rainier Ave S Waddooyinka Basaska kaliya ayaa hadda ah mashruuc gooni-gooni ah oo la qorsheynayo laguna dhisayo labo weji. Sharaxaad kooban oo ku saabsan goobaha iyo jadwalka ayaa laga heli karaa khariidadan.
Meelaha Muhiimka ah ee Horumarsan
Rainier Ave S iyo S Charles St
Horumarrada lagu sameeyay isgoyskan waxaa ka mid ah:
Ku darida dalcad jidka ku dhagan cusub oo curiyaanka loo talagalay ADA ee isgoysyada Rainier Ave S iyo S Dearborn iyo S Charles
Dib-u-habaynta waddooyinka dhinaca jidadka Rainier Ave S iyo S Dearborn iyo S Charles
Dayactirka waddooyinka bari iyo galbeed ee Rainier Ave S si loo horumariyo fududaanshaha laamiga lugu lugeeyo
Rainier Ave S iyo I-90
Marka la joogo isgoysyada Rainier Ave S iyo I-90 off ramp, waxaan ku sameyn doonaa casriyeyn la taaban karo si aan isgoysyada uga dhigno mid nabdoon, oo ay ku jiraan:
Ku dar dariiqyada dalcad curyaaminta ADA ee cusub
Dayactirka waddooyinka isgoysyada iyo dhanka galbeed ee Rainier Ave S
Ku rakibida waddo isgoys cusub oo dhanka woqooyi ah ee Rainier Ave S iyo I-90 oo ka baxsan isgoyska
Rainier Ave S iyo S State St
Xaaladda ay hadda ku sugan tahay, isku gudubka Rainier Ave S ee dhinaca bari ee waddada waxay u baahan tahay dadka lugaynaya, skate boardka wadaa, iyo baaskiilka inay ku jiraan waddada muddo dheer. Dib u cusboonaysiinta lagu sameeyay isgoyskan waxaa ka mid ah:
Dhisidda nalka cidhifyada oo muuqaal leh si isgoysyada looga dhigo mid gaaban oo ammaan ah
Ku darida dalcadaha curiyaanka ADA oo cusub oo ku yaal isgoyska dhinaceeda woqooyi
Shub cusub oo ku yaal wadada dhanka waqooyi ee isgoyska
Rainier Ave S iyo S Walden St
Hagaajinta isgoyskan oo ay ku jiraan dhisidda kaabayaasha baaskiilka si looga dhigo isgoysyada baaskiilada mid badbaado leh. Casriyeyntan waxaa ka mid ah:
Dhisidda meelaha baaskiillada ee maraan dhinacyada woqooyi iyo koonfurta ee isgoyska
Rinjiyeynta calaamadaynta isgoysyada baaskiilka cagaaran ee dhexmarta isgoyska
Horumarintu waxa kale oo ka mid noqon doona:
Dhisidda dalcada lamiga geeskeeda cusub
Dayactirka qaybaha jidadka cagta ee Rainier Ave S iyo S Walden St
Dayactirka laamiga korkeeda
Dib u cusboonaysiinta calaamada taraafigga ee leexashada bidix ee la ilaaliyo si loo yareeyo isku dhacyada darawalka iyo dadka lugaynaya
Kordhinta wakhtiga badhanka riixida udhaxeeya ee hogaaminaya
Dayactir lagu sameeyo jidka laamiga si loo hagaajiyo helitaanka jidadka cagta
Rainier Ave S iyo S Brandon St
Si la mid ah horumarka laga qorsheeyay S State St, waxaanu dhisi doonaa casriyeyn si aanu uga dhigno isgoysyada mid gaaban dadka lugaynaya, rogrogaya skateboardka, iyo dadka baaskiilaha wado. Dib u cusboonaysiinta isgoyskan waxaa ka mid ah:
Dhisidda nalalka cidhiidhiga ah ee leh dalcada cuyaaminta ADA si ay u yareeeyaan iyo uga dhigaan isgoyska mid badbaaddo leh
Dayactirka laamiga socodka dhinaca koonfureed ee S Brandon St ee ku xiga City Teriyaki
Dib-u-cusboonaysiinta waddo-goyseedka hadda jira iyo rinjiga calamda joogsiga
Shub cusub oo ku yaal wadada dhanka galbeed ee isgoyska
Rainier Ave S iyo S Findlay St
Waxaan horey u sameyn lahayn hagaajinta isgoyskan, oo ay ku jirto rinjiyeynta iyo ku dhejinta biraha dhexda si loo ilaaliyo dadka ka gudbaya koonfurta, bari, iyo dhinacyada galbeed ee isgoyska. Mashruucan waxaa ku jiri doona dib-u-cusboonaysiinta rinjiga iyo dhejisyada jira. Horumarin dheeri ah waxaa ka mid ah:
Dhisidda dalcada lamiga geeskeeda cusub oo ku yaal dhammaan afarta irid isgoyska
Dayactirka jidka socodka dhinaca koonfureed ee S Findlay St iyo dhinaca waqooyi-galbeed ee Rainier Ave S
Dib u cusboonaysiita rinjiga/nalalka tiirka lamiga kuwa dhexe
Mashaariicda Kale Ee La Socda Rainier
Kooxdayada mashruucu waxay si dhow ula shaqeeyaan mashaariicda soo socota:
MLK Khadka baaskiilka la ilaaliyay
Fududeynta gelitanka Mt Baker
Saldhig Sound Transit Judkins Park
Levey to Move Seattle 2015 waxa ku jiray maalgelinta lagu cusboonaysiinayo Jidka 7 ilaa khadka RapidRide. Isbeddelkan waxa kale oo lagu daray 2016 Qorshaha Guud ee Tareenka Gaadiidka iyo 2017 Metro isku xidha Qorshaha Range-dheer.
Dib u cusboonaysiinta Jidka 7 ilaa RapidRide R Line waxay u baahan tahay iskaashi ka dhexeeya SDOT iyo King County Metro. SDOT ayaa mas'uul ka ah in ay horumar ku sameyso waddada, jidadka socodka, iyo kaabayaasha dadka lugeynaya, baaskiil wadida, rogrogmada skate boarka iyo wadista baabuurta. Waxaanu hagaajintan u samaynaynaa si aanu u wanaajino isku halaynta baska iyo marin u helida dadka isticmaalaya gaadiidka.
Nasiib darro, saamaynta faafitaanka COVID-19 waxay hoos u dhigtay dakhliga waxayna u baahday Metro inay jojiso Khadka RapidRide R. Waxay sahminayaan siyaabaha dib loogu bilaabi karo mashruucan sida ugu dhakhsaha badan. Booqo bogga RapidRide R Line si aad macluumaad dheeraad ah u hesho.
Horraanta 2020: Metro waxay qabanisaa kulan cid walba ka soo qayb gelikarto
waxee qabanisaa kulan cid walba u furan iyadoo la kashanayso King County Metro RapidRide R Line
Luulyo 2019: Xog-ururin qof-qof ah
Sahan lala sameeyay meheradaha jooga iyo agagaarka Rainier Ave S inta u dhaxaysa S Massachusetts St iyo S Bayview St si loo ogaado wax badan oo ku saabsan keenista iyo marin u helka macmiilka si ay gacan uga gaystaan wargelinta jidadka basaska ee Rainier.
Juun 2019: Xog-waraysi daneeyayaasha
Guuri Guddiga Kormeerka Levy ee Seattle
May 2019: Xog-waraysi daneeyayaasha
Maarso-Abriil 2018: Xog-ururin qof-qof ah
Suuq weyn Viet Wah Asian
Suuqa beralay ee Rainier Farmers Market
Dadka wax xayasiiya waxay miisas dhiganyaan meelo kala duwan oo ay ku jiraan maktabadaha,-suqyada, iyo guryaha dabaqyada ah
Maarso-Abriil 2018: Xog-waraysiyada daneeyayaasha
Guddiga La-talinta Baaskiilada Seattle
Guddiga La-talinta Lugaynta ee Seattle
Guddiga La-talinta Xamuulka ee Seattle
Guddiga La-talinta Gaadiidka ee Degmada King
Xulashada Gaadiidka Isbahaysiga iyo Puget Sound Sage
Maarso 19-Abriil 14, 2018: Guri furan oo dhinaca khadka onlayn ah
Guri furan oo onlayn ah iyo sahan si loo aruuriyo fikrado ikhtiyaari fikradeed oo faahfaahsan; Ogeysiisyada waxaa ka mid ahaa boosteejada 40,000 ciwaan, iimaylka listserv, warbaahinta, iyo iimaylka iyo wicitaanada telefoonada kooxaha bulshada; Sahanka online iyo nooca waraaqda ah oo lagu turjumay Isbaanish, Shiinaha, Fiyatnaamiis, Tagalog, Soomaali, Amxaari, Khmer, Omoro, iyo Tigrinya.
2017: Wacyigelinta qorshaynta hore
La wadaagay qorshooyinka RapidRide bilowga ah iyo wakhtiga iyadoo lala kaashanayo mashaariicda kale ee SE Seattle (ay ku jiraan boosteejo, guri furan, wada sheekaysiga bulshada, iyo warbaahinta bulshada)
Mashruucan waxaa maalgeliyay 9-sano ee Levy to Move Seattle, oo ay ansixiyeen codbixiyayaashu 2015. Waxa kale oo aanu la kaashaneyna mashaariicda kale ee ku teedsan Rainier Ave S si aan u keeno qaybo ka mid ah mashruuca si dhakhso leh oo hufan.